तपाईँ बसोबास गर्दै आउनुभएको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा कति बजेट छुट्याईएको रहेछ? बजेट कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर तपाईलाई थाहा छ ? छ भने के कस्ता कामका लागि बजेट छुट्याइएका रहेछन् ?
देशभर स्थानीय तहमा सरकार निर्माण भएसँगै स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तपाईँ बसोबास गर्दै आउनुभएको वडाका लागि स्थानीय सरकारद्वारा कति बजेट छुट्याईएको रहेछ? बजेट कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर तपाईलाई थाहा छ ? छ भने के कस्ता कामका लागि बजेट छुट्याइएका रहेछन् ?
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ४ मा यो वर्ष १ करोड बजेट छुट्टयाएको छ । त्यसमा १० लाख लक्षित वर्गको लागि छुट्टयाएको छ भने ९० लाख बजेट बाटो, शिक्षा र विकास निर्माणको छुट्टयाएको छ , अरु कुनै शिर्षकमा बजेट छुट्टिएको छैन ।
म बस्दै आइरहेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ ले ७५ लाख बजेट छुट्टाएको छ । जुन सडक, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रका लागि भनेर छुट्टाइएको छ ।